छवि स्वरूप: तिनीहरू के हुन्, छवि ढाँचाका प्रकारहरू क्रिएटिव अनलाइन
पक्कै पनि धेरै पटक, इन्टरनेट ब्राउज गर्दा, तपाईं केहि जस्तो अन्य छवि ढाँचामा आउनु भयो जुन तपाईं जस्तो लाग्दैन। वास्तवमा, अपेक्षाकृत भर्खर तपाई छवि परिवर्तन ईन्जिनमा परिवर्तन देख्न सक्नुहुनेछ (गुगल, उदाहरणका लागि), छवि बचत गर्दा, विशिष्ट jpg देखा परेन, तर वेबप। र त्यहाँ धेरै छवि ढाँचाहरू छन्।
तर, छवि स्वरूप वास्तवमा के हो? त्यहाँ कति छन्? र कुन अधिक प्रयोग गरिन्छ? आज, हामी उनीहरूको बारेमा कुरा गर्छौं।
1 छवि ढाँचा के हो?
2 छवि स्वरूपका प्रकारहरू
2.8 छवि ढाँचाहरू: EPS
2.9 छवि ढाँचाहरू: BMP
2.10 अन्य कम ज्ञात ढाँचाहरू
छवि ढाँचा के हो?
छवि स्वरूपहरू, छवि फाईल ढाँचाका रूपमा पनि परिचित, वास्तवमा छविको डाटा भण्डारण गर्ने यो एक तरीका हो यसलाई कम्प्रेस नगरीकन, यद्यपि यसलाई कम्प्रेस गर्न पनि सकिन्छ (डाटा हराउने वा नहटाउने) वा भेक्टरमा रूपान्तरण गर्न।
छोटकरीमा, हामी एकको बारेमा कुरा गर्दैछौं छवि गठन गर्नका लागि आवश्यक सबै डाटा समावेश डिजिटल फाइल। यो डाटा पिक्सल हो, किनकि यसले छवि बनाउँछ। यी प्रत्येक पिक्सेल फोटोको रंग निर्धारण गर्न प्रयोग हुने बिट्सको संख्याबाट बनेका छन्। तसर्थ, ढाँचामा निर्भर, एक छवि राम्रो वा नराम्रो गुणवत्ता हुन सक्छ।
छवि स्वरूपका प्रकारहरू
इन्टरनेटमा तपाईले भेट्टाउन सक्नुहुन्छ कि प्राय: जसो jpg (वा jpeg), png वा gif हुन्छन्। तर वास्तवमा त्यहाँ छवि ढाँचाहरूको धेरै प्रकार छन्। हामी तिनीहरू प्रत्येकको बारेमा कुरा गर्छौं।
यी परिवर्णी शब्दहरु मध्ये, एक तपाइँलाई कम भन्दा कम थाहा छ निस्सन्देह अन्तिम एक हो, किनकि यो इन्टरनेटमा हेर्न सामान्य छैन। जे होस्, ती सबै गर्छन् Photograghic विशेषज्ञ समूह सामिल गर्न सन्दर्भ, वा के समान छ: जेपीईजी।
यसले के गर्छ डाटा गुम्ने डाटालाई कम्प्रेस गर्नुहोस् ताकि यो तौल कम हो। यो गर्न, यसले JFIF ढाँचा, JPEG फाईल ईन्टरचेन्ज ढाँचा प्रयोग गर्दछ।
यो ईन्टरनेटमा सब भन्दा सामान्य हो र निम्नको द्वारा विशेषता हो:
२--बिट र color छविहरू (प्रत्येक RGB र colorका लागिbबिटहरू प्रयोग गर्दछ (हरियो, रातो, र निलो)।
हराउने कम्प्रेसन (जसले यसलाई सानो बनाउन मद्दत गर्दछ)।
जेनरेशनल गिरावट त्यो हो, जब तिनीहरू सम्पादन र धेरै पटक बचत गरिन्छ उनीहरूले अधिक गुणहरू गुमाउँछन्।
त्यहाँ एक संस्करण छ, जुन JPEG 2000 भनिन्छ। यसले हानिकारक वा हानिविहीन कम्प्रेसन अनुमति दिँदछ तर राम्रोसँग थाहा छैन। वास्तवमा यो फिल्म चलचित्र सम्पादन र वितरणमा मात्र प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि चलचित्र फ्रेमहरूका लागि।
यो नाम उल्लेख छ ट्याग गरिएको छवि फाइल ढाँचा। यो एक लचिलो ढाँचा हो जुन तपाइँ TIFF वा TIF को रूपमा इन्टरनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ, यद्यपि यो धेरै साधारण छैन।
यसमा भएका सुविधाहरूमध्ये:
बिना चोट वा बिना संकुचित छविहरू बचत गर्न सक्षम हुनुहोस्।
धेरै वेब ब्राउजरहरूमा समर्थन गरिएको छैन।
सीएमवाईके, ओसीआर, इत्यादि जस्तो विशिष्ट र space्ग स्थानहरू ह्यान्डल गर्दछ।
GIF, वा ग्राफिक्स ईन्टरचेन्ज ढाँचा, मध्ये एक हो अधिकतर एनिमेसनहरू सिर्जना गर्नको लागि प्राय: प्रयोग गरिएको छवि ढाँचाहरूकिनकि यसले तपाईंलाई मोशन पिक्चर फाईलहरू रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि यो यसका लागि विशिष्ट छैन, यो फोटोको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ किनभने यसले घाटा बिना संकुचन गर्दछ, अर्थात् यसले फोटोको गुणस्तर कायम गर्दछ जुन तपाईंले यस ढाँचामा बचत गर्नुहुन्छ।
यो र color्ग प्यालेट भनिने तालिकामा छविको सबै जानकारी बचत गरेर चित्रण गरिएको छ, जसमा २256 रंग (b बिट्स) सम्म समावेश हुन सक्दछ। तिनीहरू ईन्टरनेटमा फेला पार्न सजिलो हुन्छ, यद्यपि तिनीहरू मुख्यतया लोगोहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ (यसलाई पारदर्शी बनाउन पृष्ठभूमि बिना), एनिमेशनहरू, क्लिप आर्ट्स, इत्यादि।
PNG हो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पहिले यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको थिएन (हामी १ 1996 XNUMX about को बारेमा कुरा गर्दैछौं) तर अब तपाई सजिलैसँग यो ढाँचाको साथ छवि र फोटोहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
क्षति बिना छविहरू संकुचन गर्नुहोस्।
२bबिटहरू सम्मको र depth गहिराइ प्रस्ताव गर्नुहोस् (र not बर्णाहरूको उदाहरणका लागि)।
योसँग -२-बिट अल्फा च्यानल छ।
यसले एनिमेसन उत्पन्न गर्न सक्दैन।
ट्रान्सपरेन्सीहरू र अर्ध ट्रान्सपरेन्सीहरू स्वीकार गर्दछ।
हाल यो अधिकतर तस्बिर र ग्राफिक्स, लोगो, हानिविना फोटोहरू, फोटोहरू जसमा पारदर्शिता आवश्यक पर्दछ, आदिमा प्रयोग गरिन्छ।
यस प्रकारको फाईल एक हो एडोब फोटोशपको माध्यमबाट सिर्जना गरिएको हो (वा समान)। यो छविलाई उच्च गुणवत्ताको साथ बचत गर्न प्रयोग गरिएको छ, कुनै काम नगरीकन तपाईंले गर्न सक्नु भएको। वास्तवमा यसको फाइदा हुन्छ कि यसले सबै चीजहरू बचत गर्दछ, परिवर्तनहरू, तहहरू, शैलीहरू सहित ... यसरी कि तपाईं पछि यसलाई पुन: संचार गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं स्क्र्याचबाट सुरू नगरीकन परिणामको बारेमा विश्वस्त हुनुहुन्न भने।
समस्या यो हो कि तपाइँ यी प्रकारका छविहरू ब्राउजरमा देख्न सक्नुहुन्न, तिनीहरूलाई केवल विशेष कार्यक्रमको साथ खोल्न सकिन्छ तिनीहरूलाई काम गर्नका लागि।
वेबपी छवि ढाँचा एक कम ज्ञात हो, तर एक जुन तपाई सजीलै इन्टरनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। एक हो ढाँचाले छविलाई असंपन्न कम्प्रेसनको साथ बचत गर्दछ र छवि क्षति बिना।
यस ढाँचा को उद्देश्य एक सानो आकार छ ताकि, बदले, यो पृष्ठ छिटो लोड गर्दछ। गुगल द्वारा डिजाइन, यो VP8 इंट्रा-एन्कोडि framework फ्रेमवर्कमा आधारित छ र यसमा RIFF कन्टेनर छ।
SVG हो स्केलेबल भेक्टर ग्राफिक्स। यो छवि ढाँचा मध्ये एक हो जुन तपाइँ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र फेला पार्नुहुन्छ र त्यो मुख्यतया भेक्टरहरूमा केन्द्रित छ। GIF को रूपमा, तपाईं SVG का साथ केही छविहरू एनिमेट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एकमात्र समस्या यो हो कि यस प्रकारका ढाँचाहरू अझै सामाजिक नेटवर्कहरू द्वारा समर्थित छैनन्।
छवि ढाँचाहरू: EPS
EPS encapsulated पोस्टस्क्रिप्ट हो। वास्तवमा यो ढाँचा हो एडोब सिर्जना गरियो, तर पीडीएफले यसलाई बदल्दै थियो।
छवि ढाँचाहरू: BMP
BMP Bitmap को अर्थ हो। यो स्वरूपहरू मध्ये एक हो जुन s ० को दशकमा प्रयोग हुन थाल्छ जुन बनाएर चित्रित गरिएको थियो गुणस्तरको थोरै नोक्सानको साथ संकुचन, जसले यो संकेत गर्‍यो कि प्रत्येक फाईलको आकार एकदम ठूलो थियो (बदलामा छविको रिजोलुसन उत्तम थियो)।
आज यो अझै प्रयोग गरीन्छ, यद्यपि अन्य छवि ढाँचाहरू भन्दा कम।
अन्य कम ज्ञात ढाँचाहरू
हामीले उल्लेख गरेका बाहेक, त्यहाँ अन्य छवि स्वरूपहरू छन् जुन कम लोकप्रिय रूपमा चिनिन्छ, तर व्यावसायिक रूपमा, ती अधिक प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी हुन्:
Exif यो JPEG र TIFF को समान हो। यसले केहि डेटा रेकर्ड गर्दछ जस्तै क्यामेरा सेटिंग्स, जब फोटो लिइएको थियो, एक्सपोजर को डिग्री, आदि।
पीपीएम, PGM, PBM वा PNM।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » छविहरू » छवि ढाँचाहरू